Ny valin'ny fitoriana natao tamin'i Apple ho an'ny sary an'ny MacBook Pro 2011 dia efa voavaly 7 taona taty | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny 2014, fito taona lasa izay, hoy izahay taminareo ny mpampiasa sasany dia nanatevin-daharana ary nametraka fitoriana amin'ny kilasy amin'ny Apple noho ny toe-javatra ratsy sy ny fahombiazan'ny GPU tao amin'ny MacBook Pro 2011. Nisy glitch tao amin'ny GPU -n'izy ireo izay nahatonga ireo izay voan'ny glitch sary indraindray tao amin'ny masinin'izy ireo. . Ny mpampiasa sasany dia nanova ny kisarisary tamin'ny fandoavana ny fandaniana ary izany no notakiany taona maro lasa izay. Namaly izao ny fitsarana, farafaharatsiny any Canada.
Apple dia nanova ny sasany amin'ireo solosaina ireo ho maro amin'ireo voakasik'izany, saingy tsikelikely ireo mpampiasa no nivoaka niaraka tamin'io olana io ihany. Nanjary tsy tantina intsony ny toe-draharaha ary maro ireo mpampiasa no efa nandoa ny fandaniana nahatonga ny fiovan'ny sary. Satria mampihetsi-po izy ireo dia nanapa-kevitra ny hiditra ary mametraka fitoriana amin'ny raharaha mba hahafahan'ny orinasa mandoa ny fandaniana.
Any Quebec izao afaka mahazo famerenam-bola ho an'ny fanamboarana izy ireo aorian'ny fitakiana. Efa ho fito taona taty aoriana dia nankatoavin'ny fitsarana kanadiana ihany ny farany. Izany dia hiteraka Apple tsy maintsy mandoa ny volan'ny mpanjifa voakasik'izany. Araka ny notaterin'ny PCMag, ny fifanarahana dia nohamafisin'ny Fitsarana Ambony faritanin'i Quebec tamin'ity herinandro ity. Milaza izany fa izay rehetra nividy MacBook Pro 2011 sy 15 mirefy 17 miaraka amina AMD GPU ary mipetraka ao Quebec dia afaka mahazo tamberim-bola ho an'ny fanamboarana mifandraika izay naloan'ny fiantohana.
Nilaza ny fitoriana fa voatery nandoa hatramin'ny $ 600 ny mpanjifa amin'ny fanamboarana. Ny fifanarahana dia mamaritra fa nisy fiantraikany tamin'ny tompon'ny MacBook Pro 2011 izany afaka mahazo 175 dolara kanadiana izy ireo (eo amin'ny 120 euro), ho an'ny olana sedrain'izy ireo, miampy famerenam-bola feno amin'ny vidin'ny fanamboarana hafa.
Azo idirana ny fifanarahana amin'ny alàlan'ity tranonkala ity de havaozina ao anatin'ny andro vitsivitsy miaraka amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny valin'ny fitoriana atao amin'ny Apple momba ny sary an'ny MacBook Pro 2011 dia efa manana valiny 7 taona aty aoriana